DANAB oo burburiyey saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen MUDUG - Caasimada Online
Home Warar DANAB oo burburiyey saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen MUDUG
DANAB oo burburiyey saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen MUDUG
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgallo qorsheysan oo ciidamada Xoogga dalka dalka, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran Danab ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Mudug.
Howlgalladaan ayaa waxaa lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xoogag ka tirsan Al-Shabaab, sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan Xoogga dalka.
Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay inay burburiyeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku laheyd halkaasi, ayna la wareegeen deegaanada Qaraarow, Kalaxiran, Goryaale, Dhuumaale, Caad, Gabdhaale, Waable, Xawal Xasan Cadde, Hareeri Dheere iyo Gaade.
Ujeedka howlgalladan ayey saraakiisha ciidamada Danab ku sheegeen in looga hortegayo weeraro ay had iyo jeer Al-Shabaab kasoo abaabulaan deegaanada ay ka joogaan Mudug.
Waxa kale oo ay intaasi ku dareen inay sii wadi doonaan dhaq-dhaqaaqyada milatari ee haatan ka socda gobollada dhexe, gaar ahaan Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka.
Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab ee ku aadan howlgalladaas ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada dowladda.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaan dadka deegaanka soo wajahday cabsi la xiriirta in dagaallo culus oo u dhexeeya labada dhinac ay ka qarxaan halkaasi.